တပ်ဆင်ခြင်း | Tor စီမံကိန်း | Tor ဘရောက်ဇာ လက်စွဲ
၁။ Tor ဘရောက်ဇာ ဒေါင်းလုဒ် စာမျက်နှာ သို့ သွားပါ။
၂။ Windows .exe ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုဒ်လုပ်ပါ။
၃။ (အကြံပြုချက်) ဖိုင်၏ လက်မှတ် ကို မှန်ကန်ကြောင်း စစ်ဆေးပါ။
၄။ ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ပြီးချိန်တွင် .exe ဖိုင်ကို ကလစ်နှစ်ချက် နှိပ်ပါ။ တပ်ဆင်ခြင်း ဝိဇ္ဇာ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြီးစီးအောင် လုပ်ပါ။
၂။ macOS .dmg ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ပါ။
၄။ ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ပြီးချိန်တွင် .dmg ဖိုင်ကို ကလစ်နှစ်ချက် နှိပ်ပါ။ တပ်ဆင်ခြင်း ဝိဇ္ဇာ လုပ်ငန်းစဉ်ကို ပြီးစီးအောင် လုပ်ပါ။
၂။ GNU/Linux .tar.xz ဖိုင်ကို ဒေါင်းလုဒ် လုပ်ပါ။
You'll need to tell your GNU/Linux that you want the ability to execute shell scripts. လောလောလတ်လတ် ဆွဲထုတ်ထားသော Tor ဘရောက်ဇာ လမ်းညွှန်သို့ သွားပါ။ start-tor-browser.desktop ပေါ်တွင် ညာဘက်ကလစ်နှိပ်ပါ၊ ထူးခြားလက္ခဏာများ သို့မဟုတ် အလေးပေး ရွေးချယ်မှုကို ဖွင့်ပြီး ဖိုင်ကို ပရိုဂရမ်အဖြစ် လုပ်ဆောင်နိုင်ရန် ခွင့်ပြုချက်ကို ပြောင်းလဲပါ။ Tor ဘရောက်ဇာကို ပထမဆုံးအကြိမ် စတင်ရန် အိုင်ကွန်ပေါ် ကလစ်နှစ်ချက်နှိပ်ပါ။
သတိပြုရန်- Ubuntu နှင့် အခြား Linux ဖြန့်ချိမှုအချို့ (distros) တွင် start-tor-browser.desktop ကို စတင်ရန် ကြိုးစားပါက စာသားဖိုင်တစ်ခု ပွင့်လာနိုင်သည်။ To change this behavior and launch Tor Browser instead, follow this:
Select "Run them" or "Ask what to do" under "Executable Text Files". ဒုတိယတစ်ခုကို ရွေးချယ်ပါက start-tor-browser.desktop ဖိုင်ကို စတင်ပြီးနောက် "လည်ပတ်ရန်" ကို နှိပ်ပါ။
Tor ဘရောက်ဇာ အပ်ဒိတ်လုပ်ရန် တွင် ကြည့်ပါ။